သက်ဝေ: အားနာတတ်ခြင်း၏ အကျိုး အပြစ်
Welcome January 14, 2009 at 2:11 PM
active နဲ့ passive ခံစားချက်တွေကို
ပေါ်လွင်အောင် ရေးနိုင်လို့ ဖတ်လို့ အတော်ကောင်းတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက် ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ခံစားချက်၊ တစ်ဖက်သား ခံစားချက်ကို ထင်ထင်မြင်မြင်ရှိစေတယ်။
ဒေါင်းမင်း January 14, 2009 at 3:40 PM
ပန်းခရမ်းပြာ January 14, 2009 at 4:09 PM
ကိုဧည့်သည်ကိုပဲ အပြစ် ပုံချလိုက်ချင်တယ်။
ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ရတာ မသက်သာလှဘူးလေ။
ဒီကြားထဲ ပိုပို လျှံလျှံဖြစ်အောင် လုပ်ရသေးတာ။
မလာနှိုင်ဘူး ဆိုရင် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောသင့်တာပေါ့နော်။
Anonymous January 14, 2009 at 5:16 PM
ဟုတ်ပါ့.. ကြုံဖူးပါ့..သဒ္ဓါတရားတွေနဲ့ ကုသိုလ်ကနေ..အကုသိုလ်တွေအဖြစ်..ပြောင်းကုန်ရော..
Anonymous January 14, 2009 at 5:32 PM
အဲလို ဧည့်သည်မျိုးတွေများလာလို့ အခုတော့ တော်ပါပီပဲ
ဇနိ January 14, 2009 at 9:05 PM
ကိစ္စတခုကို ရှောင်ပြီးနေတတ်တာက အားနာတတ်တာ မဟုတ်ဘူး...
ဆုံးဖြတ်ချက် မပြတ်သားတာ.. အိမ်ရှင်ကို မလေးစားတာ သက်သက်သာဖြစ်တယ်။
ကိုပေါ January 14, 2009 at 9:11 PM
ဒီပို့စ်ကလေးက ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးက အဖြစ်အပျက်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရေးပြနိုင်ပြီး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်နေတာမို့ အားနာခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို အထင်းသားပေါ်လွင်လာစေပါတယ်။
စာရေးဆရာရွှေဥဒေါင်းကတော့ ကျနော်တို့ထက် ပိုပြီး ပြတ်သားတယ်။ ထမင်းစားဘို့ ချိန်းထားတဲ့အတဲ့အချိန်ရောက်မလာခဲ့ရင် ဧည့်သည်ကို စောင့်မနေဘူး။ အိမ်မှာလည်း ထိုင်စောင့်မနေတော့ဘူး။ စားပြီးတာနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်သွားတော့တာပဲတဲ့။ ပြတ်တယ်။
အမှန်ကတော့ ကျနော်တို့လည်း အနည်းနဲ့အများ အားမနာသင့်တဲ့နေရာတွေမှာ အားနာနေမိကြတယ်။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းတွေက မရှုပ်သင့်ပဲ ပိုရှုပ်ကုန်တော့တာပေါ့ဗျာ။
nu-san January 14, 2009 at 11:14 PM
အမရေ.. ဧည့်သည်က မကောင်းတာပေါ့နော်.. မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကြိုပြီးပြောထားပေါ့။ အဲဒီလို မပြတ်သားတာတွေက ဒီလို ထမင်းစားဖိတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတောင် ဝေခွဲမရဘူးဆိုရင် ဘ၀နဲ့ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေကို ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ မသိဘူးရယ်.. ဒီမှာတော့ ရှင်းတယ်။ အိမ်ကို အလကား ဘယ်သူမှ အိမ်လည် မခေါ်တတ်ဘူး။ ခေါ်ရင်လည်း ၁ ၊ ၂ ပတ်လောက် ကြိုပြီး မေးလ်ပို့တယ်။ လာမယ် မလာဘူး ပြောလို့ရတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ခင်ခင် အဲဒီလို ပဲ လုပ်ကြတယ်။ ပြီးတော့မှ လာမယ့် လူအရေအတွက်အပေါ်မူတည်ပြီး စားသောက်စရာကို ပြင်ဆင်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်လည်း ဒီလိုပဲ.. လူကွက်တိ၊ စားစရာ ကွက်တိ စီစဉ်ကြတယ်.. အမ ပို့စ်ဖတ်ပြီး ဧည့်သည်ကို စိတ်တိုတာရော၊ စားစရာတွေ ဖတ်ပြီး ဗိုက်ဆာတာရော ရသပေါင်းစုံသွားတယ်.. :)
အမပို့စ်လေးဖတ်တော့ တခါက ညစာစားဖိတ်တာကို သတိရမိတယ်။
ဖိတ်ထားတာက နိနိပါမှ ၄ ယောက်ထဲတဲ့။
သွားခါနီးတော့ မိုးတွေက ရွာတာ မစဲတော့ဘူး။
အပြင်မှာ အေးလိုက်တာလည်း လွန်ပါရော။
မျက်စိမှိတ် ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ စားစရာတွေ အများကြီးလုပ်ထားတာတဲ့။
ဒါဆိုလည်း လာပြီလို့ပြောပြီး ချက်ချင်းကောက်ထသွားလိုက်တာ။
အဲဒီအချိန်မှာ အတူသွားမည့်ယောက်ျားလေးတွေဆီဖုန်းဆက်တော့ အင်း မိုးရွာနေလို့ စဉ်းစားနေတာတဲ့။
ဒါဆိုလည်း မစောင့်တော့ဘူး သဘောပဲလို့ သွားနှင့်လိုက်တာ။
တကယ်လည်း ဟိုအိမ်မှာ စားစရာတွေပြင်ဆင်ထားတာ အားနာစရာသိပ်ကောင်းတယ်။
ပြန်လာတဲ့အခါတော့ အအေးမိလို့ ဖျားပါတယ်။
ATN January 16, 2009 at 12:52 AM
ဟုတ်ပါ့ဗျာ... အားနာတဲ့ အကျင့်က ကောင်းတဲ့ အကျင့်တခု မဟုတ်တာ အသေအချာပါပဲ...
ပုံရိပ်တော့ အားနာတာထက် မပြတ်သားတာ ပိုဆိုးတယ် ထင်တယ်။ မလာဘူးဆိုလဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောသင့်တာပေါ့။
အားနာတတ်တာ တစ်ခါတစ်ခါ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ခံရတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ရထားအတူစီးခဲ့သူ … - ကိုယျ့အတှကျတော့ မီးရထားဆိုတာ နစေ့ဥ◌ျဘဝထဲမှာ မရှိမဖွဈ အရေးပါတဲ့အရာတခု။ ရထားပျေါ ကွုံဆုံရသူတှထေဲမှာ အမှတျတရဖွဈတဲ့ သူတယောကျရှိခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီနကေ့ ကိုယျ့ထိုငျခ...
Dream - Love is... not what you play hard-to-get game If you agree on that plane let me reread the state of untamed... There'sajasmine lives life peacefully bloomi...